ऋषि धमलाले कुलमानको बिरुद्ध बोल्ने मुकेश काफ्लेलाई अन्तरबार्तामै थर्काउदै भने:मुख ठिक ठाउँमा राख्नुस – Dainik Sangalo
ऋषि धमलाले कुलमानको बिरुद्ध बोल्ने मुकेश काफ्लेलाई अन्तरबार्तामै थर्काउदै भने:मुख ठिक ठाउँमा राख्नुस
August 27, 2020 1480
काठमाडौं, ११ भाद्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति असन्तुष्ट छन् । आफूले विगतमा खडा गरेको आधारले विद्युतका क्षेत्रमा भएको सकारात्मक नतिजाको जस कुलमानले लिएको उनको आरोप छ । तर, उनले केही काममा भने कुलमानको प्रशंशा गरे ।
‘उहाँले विद्युत चुहावट घटाउनुभएको हो,’ मुकेश काफ्लेले ऋषि धमलासँग जनता जान्न चाहन्छन्मा भने । कुलमानको कार्यकालमा विद्युत चुहावटमा राम्रो सफलता भएको उनको भनाई थियो । तर, अरुलाई नराम्रो देखाएर आफू राम्रो देखिन खोजेको आरोप लगाए ।
कुलमानको कार्यकालमा कुनैपनि जलविद्युत आयोजना शुरु भई उपत्पादन शुरु नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ट्रान्समिसन लाइनको काम नभएकोले देशमा दैनिक करोडौंको विद्युत खेर गइरहेको बताए । उनले भने, ‘खै ट्रान्समिसन लाइनको काम भएको ?’
Prevनेपालमा आज एकैदिन १ हजार १११ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
Nextआज २०७७ भदौ १२ गते शुक्रबारको राशिफल
असार २७ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
आजदेखि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने, गृह मन्त्रालयले गर्यो यस्तो निर्णय
माझी बस्ती निर्माणबाट श्वेता खड्काले हात झि’किन्
बाराको देवताल गाउँपालिकामा नौ जनप्रतिनिधिसहित ४६ संक्रमित
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (97917)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (75506)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (70224)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64937)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50750)